शुभ मंगोलियन साइतहरू | Tsem Rinpoche
आदरणीय विशेष साथीहरू,
हामीसँग तपाईंको लागि अर्को रोचक छोटो पोष्ट छ। तपाईंहरूलाई थाहा नै छ हामीसँग शहरमा १३ ओटा विभाग भएको केचरा छ। मैले हरियाली क्षेत्रमा जग्गा खोज्दै थिएँ। विभिन्न विद्यार्थी र कार्यक्रमहरूको सहयोगमा, हामीले एक टुक्रा जमिनको खबर पायौँ । म पहिलो पटक जमिन हेर्न जाँदा विद्यार्थीहरूको समूसँग गएँ र त्यहाँ गएपछि हामी त्यहाँको हरियाली देखेर चकित भयौँ। हामीले हाम्रो लागि यो जमिन सही छ वा छैन भनी दोर्जे शुग्देनको एउटा सानो प्रार्थना गयौँ र हामीले तुरून्तै शुभ चिन्ह देख्यौँ, सफा आकाशबाट हल्का वर्षा भयो। म र मसँग भएका सबै साथीहरूले आन्नद र शान्तिको महसुस गर्यौं। हामीले महसुस गर्यौं कि यो जमिन हाम्रो लागि नै सिर्जित थियो र केबल हामी जस्तै साधारण मानिसहरूको लागि यो राम्रो साईत देखा परेको थियो।
हामीले ऋण लियौँ, बिक्री कागजातहरू बनायौं र जमिन अधिग्रहण गर्यौं। हामी यस प्रक्रिया मार्फत जाँदै थियौँ, अकस्मात मैले एक मंगोलियन भिक्षुबाट उपहारहरुसहितको एक पोष्टकार्ड प्राप्त गरें जसलाई मैले कहिल्यै भेटेको थिइंन। त्यही पनि उक्त भिक्षुले मलाई नयाँ वर्षको शुभकामना दिंदैँ पोष्टकार्ड र उपहारहरू पठाउनु भएको थियो। म सोच्दै थिएँ, “त्यो व्यक्ति को होला जसलाई मैले मंगोलियामा कहिले भेटिंन?”। म मेरो आमाको तर्फबाट आधा मंगोलियन हुँ। त्यसैले मैले उपहारहरूको सरहना गर्दै, कार्डलाई क्यामरामा कैद गरेँ र खिचिएका तस्वीरहरू केही साथी र विद्यार्थीहरूलाई पठाएँ। त्यसपछि मैले यो बारेमा केही सोचिंन। यद्यपि मैले कार्डमा आकाशबाट दोर्जे शुग्देनको अनुहारले नियालिरहेको देखेँ र यो मेरो लागि शुभ संकेत थियो।
केही समय पछि म हाम्रो बाँझो तर हरियो केचरा फरेस्ट रिट्रिट (केअफआर)को जमिनमा अन्वेषण गर्ने लक्ष्य लिएर भ्रमण गर्न गएँ। हामीले अहिलेसम्म निमार्ण सुरू गरेका थिएनौँ। हामी हाम्रो जमिनमा जाँदै थियौँ, मेरो एकजना विद्यार्थी मार्टिनले गाडी रोक्यो र दृश्यलाई संकेत गर्दै भन्यो र त्यसपछि मैले उसलाई पठाएको पोष्टकार्डको तस्वीर उसको स्मार्टफोनमा देखायो। म त छक्कै परें! यो पोस्टकार्डको तस्विरमा ठ्याक्कै उहि दृश्य थियो जहाँ केवल भिक्षु र विश्व शान्ति संरक्षकको अनुहार चाहिँ थिएनन् । हामी त्यो जमिनमा पहिलो पटक आउँदा परेको र अहिले परेको हलुका वर्षाको बारेमा सोचेर म केही समय त्यहिं उभिएँ। यो साँच्चै एक स्पष्ट शुभ संकेत थियो कि मेरो संरक्षक दोर्जे शुग्देनले यो जमिन प्राप्त गरेर अन्य मानिसहरूलाई सुविधा प्रदान गर्नको लागि केही निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ। अब मलाई कुनै संदेह भएन। मलाईृ मात्र होइन, तर धेरै मानिसहरूले दोर्जे शुग्देनबाट स्पष्ट संकेत पाउने गर्दछन्। केही मानिसहरूले यसलाई एक संयोगमा सिमित राख्न सक्छन् र त्यो आ-आफ्नो रोजाइ हो, तर जब यो पर्याप्त पटक हुन्छ, मलाई थाहा हुन्छ कि यो शुभ संकेत हो। मैले पछिल्लो ३० वर्षमा दोर्जे शुग्देनबाट राम्रो शुभ संकेत र चिन्ह देखिरहेको छु। मलाई आफू साधारण व्यक्ति भएकाले संकेतहरू व्याख्या गर्ने आफ्नो क्षमतामा शंका लाग्छ तर जब म मेरो शिक्षक वा प्रतिष्ठित लामाहरूसँग परामर्श लिन्छु, अनि धेरै पटक त्यहि शंकेतहरुको पुष्टि हुन्छ । अहिले संसारको सबैभन्दा ठूलो दोर्जे शुग्देनको मूर्ति यस भूमिमा छ। यसले मलाई त्यस पोष्टकार्डको याद दिलायो जुनमा दोर्जे शुग्देनको आशीर्वादले भरिपूर्ण अनुहारले आकाशबाट नियालिरहेको थियो।
अहिले यो तीन वर्षको अवधिमा, हामीले केचरा फरेस्ट रिट्रिटको चरण १ समाप्त गरी चरण २ सुरु गरेका छौँ।
मैले यस सज्जन, दयालु र बुद्धिमान संरक्षक दोर्जे शुग्देनलाई विगत ३० वर्षदेखि सधैँ विश्वास गरेको छु। उहाँ धेरै सकरात्मक कुराहरु र मेरो कार्य वृद्धि हुनुमा महत्वपूर्ण हुनुहुन्छ। प्रसिद्ध तथा महान् लामा येशेले भनेका थिए कि केवल संरक्षक दोर्जे शुग्देनका कारण उहाँका सबै कार्यहरू सफल र लाभकारी बनेका थिए। लामा येशे समर्पित अनुयायी हुनहुन्थ्यो। म लामा येशेसँग सहमत छु।
यो मंगोलियाबाट मलाई पठाइएको अविश्वसनीय पोष्टकार्ड हो जुन निर्माण गर्नु अघिको हाम्रो नयाँ केचरा फरेस्ट रिट्रिटसँग धेरै मेल खान जान्छ।
यो जमिन हो जुन पहिले हामीले खरिद गर्दा केचरा फरेस्ट रिट्रिट थियो। यो बेंटन्ग, मलेसियामा अवस्थित छ। यो मंगोलियाबाट पठाएको पोष्टकार्ड जस्तो देखिन्छ। हाम्रो जमिनको खुल्ला स्थानमा अवस्थित यो एक मात्र आँपको रूख हो जुन गर्व र बलियोसँग रहेको छ। अब यस भूमिमा २४ फिट (७.३ मि.)को दोर्जे शुग्देनको मूर्ति अवस्थित हुन्छ।
यद्यपि मेरा क्षमताहरू सिमित भए तापनि, मेरो लामा र संरक्षकको आशीर्वादका कारण लाभकारी कार्यहरू हुन सक्छन्। यो तपाईंको लागि, तपाईंको जीवन, तपाईंको काम र तपाईंको केन्द्रको लागि पनि हुन सक्छ। हामी सबैले धेरै बाधाहरू भोगिरहेका हुन्छौँ र हामीलाई मदत चाहिन्छ। दोर्जे शुग्देनमा विश्वास गर्नुहोस्। दोर्जे शुग्देनले क्षमा गर्नु हुन्छ। विगतमा तपाईंले उहाँको विरूद्धमा नकारात्मक विचार र शब्दहरू भनेता पनि उहाँ धेरै क्षमाशील हुनहुन्छ र रिसको कुनै कण पनि उहाँमा छैन, उहाँले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभइसकेको छ। तपाईंको मन मष्तिस्कमा उहाँलाई स्थान दिनुहोस् जो अरु कोहि नभएर मन्जुश्री हुनुहुन्छ। उहाँलाई आफ्नो जीवनमा ल्याउनहोस् तपाईंले परिवर्तनहरू देख्नुहुनेछ। उहाँले के चाहनुहुन्छ? तपाईंको अस्थायी खुशी र आखिरमा सांसारिक स्वतन्त्रता चाहनुहुन्छ। उहाँलाई पुकार गनुहोस् र उहाँमाथि भरोसा राख्नुहोस्। तपाईं कहिल्यै पछुताउनु हुने छैन।
मेरो इच्छा दोर्जे शुग्देनको ठूलो तस्विर सहित उहाँको सबभन्दा ठूलो पूजाकोठा बनाउने थियो, जुन अब पूरा हुन गईरहेको छ।
पछि गएर केचरा फरेस्ट रिट्रिट बन्ने जमिनमा हाम्रो नजर परेको यो पहिलो पटक हो। यो खुला दिनको प्राथना गर्दा दोर्जे शुग्देनले स्पष्ट संकेत दिनुभएको थियो।
माननीय छेम रिन्पोछेको व्यक्तिगत सहायक पादरी ल्हो सेन्ग पिओद्वारा टिप्पणी
जनवरी ३१, २०१२ को दिउँसो आकाशमा हल्का बादल देखिएको थियो तर पानी पर्ला जस्तो कालो बादलले ढाकेको थिएन। माननीय छेम रिन्पोछे र केही विद्यार्थीहरू मूल सडकमा उभिएर केचरा फरेस्ट रिट्रिटको भविष्यको बारेमा छलफल तथा कुराकानी गर्दै थिए। सामान्यतया भन्ने हो भने एकदमै राम्रो वातावरणको सिर्जना भइरहेको थियो। रिन्पोछेले हामीलाई वातावरण महसुस गर्नको लागि एक क्षणको लागि शान्त हुन आग्रह गर्नुभयो। मोटरसाइकलको आवाज बाहेक, शान्त थियो, मन्द बताससँगै पातहरूको सुस्केरा, पंक्षीहरू र कीराहरूको ध्वनी, प्रकृतिसँग एक तत्काल सम्बन्ध बन्यो जुन ध्यान बस्नको लागि अनुकूल थियो। त्यसपछि रिन्पोछेले भन्नुभयो, “दोर्जे शुग्देन, यदि यो ठाउँ सही हो भने कृपया केही शुभ चिन्ह देखाउनुहोस्…” लगभग १० सेकेन्ड पछि, मैले आकाशबाट हल्का वर्षा भएको महसुस गरेँ, र थोरै समय, लगभग ५ सेकेन्डसम्म पानीका थोपा जमिनमा परेपछि रोकियो। आकाशलाई बादलले ढाकेको भए तापनि यो संकेत स्पष्ट थियो, प्राय यस्तो बादलबाट वर्षा हुँदैन र यति छोटो समयमा त बिल्कुलै सम्भावना थिएन। तर रिन्पोछेले प्राथना गरेपछि नै वर्षा हुनुभनेको शुभ संकेत नै थियो।
-पादरी ल्हो सेन्ग पाओव
केचारा हाउसको अध्यक्ष डटुक मे फंगद्वारा टिप्पणी
त्यसदिन, रिन्पोछे र हाम्रो एउटा समूह मार्टिनको नेतृत्वमा केही टुक्रा जमिन हेर्नको लागि
हेर्नको लागि जग्गाको अन्तिम टुक्रा जलन चामांग बेन्टंगतिर थियो। हामी जमिनको बाहिर उभियौँ र हामी सबैलाई यो जग्गा मनपर्यो।
त्यसपछि रिन्पोछेले हाम्रो संरक्षकलाई संकेत दिनको लागि अनुरोध गर्नुभयो। हामी उभिएको ठाउँमा केही बादल वा बिजुली र चट्याङ्को गढ्गढाहट बिना नै वर्षाको ठुलो थोपाहरु परे र त्यसपछि केही क्षणमा नै वर्षा रोकियो।
-डटुक मे फङ
केचारा सुप भान्साको अध्यक्ष, डटो रूबी खोंगद्वारा टिप्पणी
एक दिन रिन्पोछेले आफ्ना केही विद्यार्थीहरूलाई बैठकमा बोलाएर भन्नुभयो कि हामीले एक रिट्रिट केन्द्र बनाउनुपर्छ जसकारण हामीलाई प्राय छिमेकमा पार्क गरिने एकदमै धेरै कारहरूको बारेमा उजुरी गर्ने छिमेकीहरूबाट समस्या हुनेछैन। यो केएलबाट एक घण्टाभन्दा बढी टाढा हुनुहुँदैन, किनभने यदि धेरै टाढा भयो भने, शहरका मानिसहरू आउजाउ गर्दा बढी समय लाग्ने हुँदा धेरै थकित हुनेछन्। रिन्पोछेले केही विद्यार्थीहरूलाई उपयुक्त जमिनको खोजी गरि हामीहरूलाई बताउन लगाउनुभयो।
केही हप्ता पछि, तीन टुक्रा जमिन पहिचान गरयो। निश्चित दिन तोकेर हामी दुईवटा कारमा गयौँ।यस दौरानमा डटुक मे, पादरी हेन्री, आइरिन, मार्टिन र लि खेंग जानुभएको थियो। पहिलो टुक्रा जेन्टिङ सेम्फ नजिकै थियो जुन हामी सबैले राम्रो होला भन्ने सोचेका थियौँ। दुर्भाग्यवश, हामीले स्पष्ट रूपमा राजमार्गबाट ट्राफिकको आवाज सुन्न सक्दथ्यौँ। दोस्रो टुक्रा पनि अनुचित थियो किनभने भूमिको बीचबाट पानीको भेल बग्छ भनेर जग्गा दलालले हामीलाई गलत जानकारी दिएको थियो र खासमा त्यो भेल जग्गाको ठिक किनारमा थियो।
हामी निराश भयौं र विद्यार्थीहरू मध्ये एक जनाले हामीलाई तेस्रो टुक्रामा जान रद्द गर्नुपर्छ भने किनकी यो अलि पर पर्थ्यो र बेन्टोंग शहर भएर जानुपर्थ्यो जहाँ सामान्यतया भारी ट्राफिक हुन्छ। तथापी पादरी हेन्री र मैले जाने निर्णय गर्यौं किनकी हामी त्यति टाढा आइसकेका थियौँ। सबैजना थकित थिए किनभने यो एकदमै गर्मी दिन थियो।
जब हामी सबै जलन चमांगमा भएको तेस्रो जग्गामा आइपुग्यौँ, सबैजना तेस्रो जमिनको छेउ उभियौँ, किनभने यसको वरिपरि बार लगाइएको थियो। रिन्पोछे सिधै म कहाँ आउनुभयो, उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो र मलाई यो जग्गा मनपर्यो वा परेन भनेर सोध्नुभयो। “मैले भने, मलाई यो मनपर्यो,” रेन्पोछले पनि जवाफ दिनुभयो “मलाई पनि यो मनपर्यो”। हामीले धेरै रोपनी समतल जमिन र त्यसलाई पहाडले घेरिएको देख्यौँ र यो अरू ठाउँभन्दा निर्माण गर्न सजिलो र उपयुक्त पनि थियो। एक वा दुईबाहेक, बाँकीका साथीहरूले पनि मन पराए।
रिन्पोछेले शान्त रहेर केबल वातावरणमा भिज्न र साथ साथै हामीले कस्तो महसुस गछौँ बताउन अनुरोध गर्नुभयो। त्यसपछि रिन्पोछेले माथि हेरेर भन्नुभयो कि, “यदि हामीले हाम्रो लागि चाहेको कुरा निर्माण गर्न यो उपयुक्त जमिन हो भने, हामीलाई एउटा संकेत देखाउनहोस्” ,हामी सबै चुप लाग्यौँ र ध्यान त्यता केन्द्रित गर्यौं। मलाई लाग्छ कि डेढ मिनेटमा, सिमसिम पानी पर्यो। यो घमाइलो दिन थियो र हाम्रो आसपासमा मात्र सिम सिम पानी परिरहेको थियो। सबैले यसको अनुभूति गरे। मेरो मतलब यो एक कल्पना थिएन। रिन्पोछेले फेरि आकाशतिर हेर्नुभयो, आफ्ना हत्केलाहरू जोड्दै धन्यवाद भन्नुभयो।
केही हप्ता पछि मंगोलियन पोष्टकार्ड आइपुग्यो।
-डटो रूबी खोंग
केचरा फरेस्ट रिट्रिटको जमिन कसरी प्राप्त गयौँ : पादरी हेन्री ओओईद्वारा टिप्पणी
हामीले मुस्किलले पाएको अर्को जग्गामा निर्माण नगरेपछि रिन्पोछेले केहि मानिसहरुलाई बेन्टोंग शहरसम्म भएपनि जग्गा खोजी गर्न लगाउनुभयो । तीमध्ये एक मार्टिन थिए जसले केही एजेन्सीलाई सम्पर्क गरे। म मार्टिनका साथ केही जमिनका टुक्राहरू हेर्नको लागि गएँ। तीमध्ये एक केचरा फरेस्ट रिट्रिटको जमिन थियो। गेटको जग्गामा ताल्चा लगाइएको हुनाले ती एजेन्ट र उनकी श्रमतीले हामीलाई मुख्य सडकबाटै जलन चमांगको मुख्य सडकमा रहेको जग्गा देखाउनुभएकोथियो।
रिन्पोछेले हामीले हेरेका जमिनहरूमा जान चाहनुभयो र केही केचरियनहरूसँग हामीले केचरा फरेस्ट रिट्रिट लिनु अघि दुईवटा जमिनको टुक्रा हेरेका थियौँ। यो घमाइलो साँझ थियो, लगभग साँझको ५ बजेतिर हामी जलन चमांगमा पुग्यौँ। गेट अझै पनि ताल्चा लगाइएको हुनाले, रिन्पोछे केचरा फरेस्ट रिट्रिटको जमिनको सडकमा तल र माथि गर्नुभयो। रिन्पोछेले हाम्रो विचार सोध्नुभयो र यो जमिनमा सजिलो पहुँच प्रदान गर्ने सडक उपलब्ध छ, पानीको स्रोत र जमिनको भूभाग पनि जेन्टिङ्ग सेम्फको तुलनामा राम्रो भएको हुनाले यो जमिन उपयुक्त छ भन्ने कुरामा सामान्य सहमति भयो। त्यहाँको एउटा मात्रै विलम्ब के थियो भने मोबाइल फोनको टाउर लागिरहेको थिएन।
सामान्य सहमति पछि, रिन्पोछेले माथि हेरेर भन्नुभयो “मेरो भगवान्, यदि यो जमिन हाम्रो लागि रिट्रीट केन्द्र बनाउन उपयुक्त जमिन हो भने कृपया हामीलाई एक संकेत देखाउनुहोस्।“ रिन्पोछेले हामीलाई चुप लाग्न भन्नुभयो किनभने हामी आपसमा कुरा गर्दै थियौँ। केही मिनेट बितिसकेपछि हामीले आफू उभिएको ठाउँमा हल्का वर्षाको महसुस गर्यौं। थारै पानीको थोपा मेरो चस्मामा पर्यो र मैले माथितिर हेर्दा आकाश सफा थियो। त्यसपछि रिन्पोछेले भन्नुभयो हाम्रो संरक्षकले हामीलाई संकेत दिनुभयो। हामीले यो जमिन लिनुपर्छ।
-पादरी हेनरी ओओई
आइरिन लिमद्वारा टिप्पणी
जब हामी चमाङ्गतिर जादैँ थियौँ, रिन्पोछेले भन्नुभयो– “यसले गादेन मठमा जाने मुनगड सडकको सम्झना दिलाउँछ है? कति रमाइलो भइरहेको छ, कति पछि हामी सँगै घुम्न पायौँ।“ मैले टाउको हल्लाएर सहमती जनाएँ र भने, “हो रिन्पोछे”। अनि त्यसपछि जब हामी जमिनतर्फ गयौँ वर्षा कम भएर हरायो। जब पादरी सेंग प्याउले कारलाई रोक्न थाले, वर्षा रोकियो। त्यसपछि रिन्पोछेले फेरि मलाई हेर्नुभयो र भन्नुभयो – “आइरिन, मैले तिमिलाई भनेको थिएँ नि वर्षा रोकिनेछ भनेर।“ म स्तब्ध भएँ। हामी जमिन हेर्नको लागि सडक नजिकैको जग्गातिर लाग्यौँ। त्यही समयमा, डटुक मे, पादरी हेन्री र मार्टिन चाउ (जसले यो उपयुक्त जमिन भेटाउनुभएको थियो र उहाँले नै हामलिाई नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्थ्यो) पनि हामीसँगै जमिन हेर्न आउनुभएको थियो। जब हामी सडकमा उभिएर जग्गाको बारेमा छलफल गर्दै थियौँ, रिन्पोछेले ठूलो स्वरमा भन्नुभयो, “यदि यो हाम्रो लागि सही स्थान हो भने हामीलाई संकेतहरू देखाउनुहोस्”। हामीबीच पूर्ण मौनता छायो र हामी उहाँको प्रतिक्षामा बस्यौँ। त्यहाँ सिम सिम पानी पर्न थाल्यो, हामीले हाम्रो कारलाई सडकसम्म लैजाँदासम्म पानी रोकिसकेको थियो। कतै हाम्रो आँखाले हाम्रो साथ चलखेल त गरिरहेको छैन भनी पुष्टि गर्नको लागि हामी सबै केही समय पूर्ण मौनतामा बस्यौँ।। हामी जान्दथ्यौँ कि रिन्पोछे खुशी हुनुभयो भनेर किनभने हाम्रो ईश्वरहरुले हामीलाई संकेत देखाउनुभएको थियो। त्यसपछि हामीले तुरून्तै केचरा फरेस्ट रिट्रिट बनाउने जमिनको खरिद हस्ताक्षर गर्यौं।
म स्पष्ट रूपमा त्यो दिनलाई सम्झन्छु जुन दिन छेम रिन्पोछे पहिलो पटक चमांगको जमिन हेर्न आउनुभएको थियो जसमा अहिले केचरा फरेस्ट रिट्रिट बनाइएको छ।
त्यो भन्दा केही हप्ता अघि, रिट्रिट केन्द्रको लागि उपयुक्त स्थान खोज्न निर्देशन दिइएको थियो र एकमात्र मापदण्ड भनेको जग्गाको बनोट समतल हुनुपर्ने र केचरा विश्व शान्ति केन्द्र जेन्टिङ्ग सेम्फबाट ३० मिनेटमा पुग्ने हुनपर्ने थियो।
अन्तमा, ४ वटा सम्भावित साइटहरूको एक सानो सूची बनाइयो र हामी र अग्रज व्यक्तित्वहरूले ति साइटहरू हेर्न जानको लागि रिन्पोछेलाई निम्तो दियौँ। भ्रमणको दिन, चमाङ्ग जमिन हेर्ने साइटहरूको सूचीको अन्तिममा परेको थियो। त्यसअघि हामीले पेट्रोनस पट्रोल किओस्क को नजिकै बेन्टोङ्गमा अर्को टुक्रा जमिन हेरेका थियौँ। त्यस यात्रा पछि जब रिन्पोछे, चमाङ्ग घुम्नको लागि कारभित्र छिर्न लाग्नुभयो मुसलधारे पानी पर्यो। पानीले गर्दा कारको अगाडिको भागसमेत मैले देख्न सकिनँ।
यो भ्रमण स्थगित गर्ने कि भनेर प्रश्न उठाइयो तर रिन्पोछेले कुनै पनि अवस्थामा भ्रमण गर्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभयो। म सोचिरहेको थिएँ कि रिन्पोछेले त्यस्तो प्रकारको तुफानमा चमाङ्ग जमिन कसरी हेर्न सक्नुहुनेछ ।
अहिलेको केचरा फरेस्ट रिट्रिटको मुख्य द्वारभन्दा लगभग १०० मिटर पर अचानक वर्षा रोकियो। मलाई सम्झना छ कि यो बिस्तारै नभई चमत्कारिक रूपमा रोकियो। आइरिन लिम जो कारमा रिन्पोछेको साथमा थिइन मलाई पछि भन्दै थिइन, कि रिन्पोछेले उनलाई भन्नुभएको थियो कि वर्षा बन्द हुनेछ र यो उहाँले भने जस्तै भयो।
रिन्पोछे कारबाट बाहिर निस्किनुभयो र हामी सगैँ बाहिरी गेटबाटै त्यो भूमि हेर्नुभयो किनभने हामीसँग प्रवेश गर्नको लागि साँचो थिएन। मलाई रिन्पोछेले भूमि धेरै राम्रो देखिन्छ भन्नुभएको सम्झना छ। केही समय पछि रिन्पोछेले हाम्रो संरक्षक दोर्जे शुग्देनलाई प्रार्थना गर्नुभयो र सोध्नुभयो कि यदि उहाँले त्यस भूमिमा रिट्रिट केन्द्र बनाउन चाहनुहुन्छ जहाँबाट उहाँको सन्देश विश्वव्यापी रूपमा फैलिनेछ। याद गर्नुहोस् कि पानी रोकिसकेको थियो र त्यो ठाँउ सुख्खा भइसकेको थियो तर रिन्पोछेले दोर्जे शुग्देनलाई प्राथना गर्नासाथ रिन्पोछेको शिरमा पानीको थोपा झर्‍यो। त्यो पानीको एक थोपासँगै रिन्पोछेले भन्नुभयो, संरक्षकले संकेत दिनुभयो कि केचरा फरेस्ट रिट्रिट चमाङ्गमा नै बन्नेछ।
त्यसको केही महिनपछि केचरा फरेस्ट रिट्रिटको निर्माणको क्रममा संरक्षक दोर्जे शुग्देनले अनेकौ संकेत र चमत्कार गरिरहनुभयो।
फङ्ग लि खेङ्गद्वारा टिप्पणी: २०१२मा केचरा फरेस्ट रिट्रिटको प्रथम भ्रमण
चिनियाँ नयाँ वर्ष थियो र म मलेसियामा मेरो परिवारसँग बिदा मनाउनको लागि फर्किएको थिएँ। मेरो मलेसिया यात्राका मुख्य यादहरू छेम रिन्पोछे र केचरियन साथीहरूसँग समय बिताउनु थियो।
चिनियाँ नयाँ वर्ष २०१२ विशेष गरी स्मरणीय थियो किनभने यो वर्ष हामीले रिट्रिट केन्द्रको लागि जमिनको उत्तम टुक्रा फेला पारेका थियौँ जुन आध्यात्मिकता चाहनेहरूको लागि स्वर्गसमान हुनेछ।
चिनियाँ नयाँ वर्षको ८औँ दिनमा, रिन्पोछेलाई पहिलो रिट्रिट केन्द्र बनाउनको लागि दुईवटा उपयुक्त जमिन फेला पारेका मार्टिन, एक साथी केचेरियनलाई सम्मान गरियो। यस अवसरको लागि रिन्पोछेसँग डटुक मे, डटो रुबी, पादरी हेन्री, पादरी सेंग प्याउ र आइरिनका साथै मार्टिन पनि थिए।
हामी पहिलो स्थानमा पुग्यौँ र वरिपरि हेर्दै विचारहरू व्यक्त गर्यौं। त्यसपछि आकाश अन्धकार हुँदै गयो र हामीलाई कारमा पुग्न र दोस्रो स्थान — जलन चमाङ्ग बेन्टोङ्गमा जान उत्प्रेरित गर्‍यो ।
जब हामी बेन्टोङ्ग शहरमा पुग्यौँ, हाम्रो बायाँतिर बसस्टप थियो, अचानक भारी वर्षा हुनथाल्यो। म आफैँमा सोच्न थाले “ओहो ! यस मौसममा यो जमिन हेर्न असम्भव हुनेछ। तथापि, हाम्रा २ ओटा गाडी बेन्टोङ्ग शहरतिर निरन्तर रूपमा गए। जब हामीले जलन चमाङ्गतर्फ बायाँ मोड्यौँ, वर्षा कम भयो र जबसम्म हामी जमिनमा पुग्यौँ, पानी पूर्ण रूपमा रोकियो। मैले बुझें कि भारी वर्षा छिटो पार हुन्छ तर ५ मिनेटमै हुनु साँच्चै असाधारण थियो। मैले आफैमा सोचें — यो पक्कै पनि रिन्पोछेको काम हुनुपर्छ किनभने मैले कथाहरूको बारेमा सुनेको छु जहाँ अत्याधिक सिद्ध धर्म गुरूहरूमा मौसम नियन्त्रण गर्ने क्षमता हुन्छ।
त्यसपछि हामी सबै कारबाट बाहिर निस्कियौँ, र हामीले तस्विरहरूमा देख्न पनि सक्छौँ, हामीलाई छाता प्रयोग गर्न आवश्यक परेन। हाम्रो समूहले जमिन र नक्सालाई हेर्दै भन्दै थियौँ कि समतल जमिन अगाडि र पहाडहरू पछाडि सँगै मिलाउँदा रिट्रिट केन्द्रको लागि उपयुक्त ठाँउ देखिन्छ। हामी सबैलाई उक्त ठाँउ मनपरेको थियो, सोहि समयमा रिन्पोछेले हामीलाई शान्त रहन आग्रह गर्नुभयो। जब प्रकृतिको प्राकृतिक ध्वनिले हामीलाई घेर्यो, रिन्पोछेले संरक्षकसगँ आग्रह गर्नुभयो कि यदि हाम्रो काम र सबैको हितको लागि यो एक उपयुक्त स्थान हो भने संकेत दिनुहोस्। रिन्पोछेले गरेको प्रार्थनाको केही सेकेन्ड पछि, मैले मेरो अनुहारमा केही पानीका छिटा महसुस गरे। त्यो चमत्कार देखि सबै चकित भई एकअर्कालाई हेर्यौँ। ती केही छिटा पछि फेरि पानी परेन। त्यसकारण रिन्पोछेको अनुरोधको प्रतिक्रियामा यो सत्य रूपमा सकारात्मक संकेत थियो।
हामी क्वालालम्पुर फर्किनु अघि केहि समय त्यही बस्यौँ।
फर्किदैं गर्दा हाम्रा गुरू र संरक्षकले हामीलाई दयालु काम गर्न प्रेरित गरेको सुअवसरको दर्शन गर्न पाउँदा म एकदमै आभारी भएँ। विभिन्न बाधाअड्चन आए पनि हामीले केचरा फरेस्ट रिट्रिटमा गर्ने कामम विश्वास दिलाउने अभिपुष्टिको यो छोटो पल हो।
आज , केचरा फरेस्ट रिट्रिटको चरण १ पूरा भएको छ र हामीले हाम्रा परिवार र नजिकका साथीहरूलाई शान्ति र आनन्दको यस ठाँउमा आनन्द लिन स्वागत गरेका छौँ। अन्य मानिसहरू यस केन्द्रमा आई आशीर्वाद पाई आन्नदित भएको देख्दा मलाई आनन्द महसुस हुन्छ। म केचरा फरेस्ट रिट्रिट पूरा भएको हेर्न चाहन्छु जुनपछि हामी अझै अतिथिहरूलाई स्वागत गर्न सक्षम हुनेछौं।
कृतज्ञ र नम्र,
-फङ्ग लि खेङ्ग
« तपाईं धर्म निरपेक्ष वा आध्यात्मिक हुनुहुन्छ?
Tibetans Welcome Mountain Spirits in Faith Ceremony »
12 Responses to शुभ मंगोलियन साइतहरू
Tsem Rinpoche on Nov 23, 2018 at 6:10 am
Beatrix Ooi on Aug 10, 2018 at 6:33 am
Pastor Adeline Woon on Aug 7, 2018 at 8:21 pm
Pastor Adeline Woon on Jul 27, 2018 at 9:06 am
Pastor Adeline Woon on Jul 25, 2018 at 5:52 am
Joy Kam on Jul 22, 2018 at 8:10 pm